Roobaba Mahiigaan ah oo Go’doon geliyay Deegaano kuyaala Gobolada BBG – SBC
Roobaba Mahiigaan ah oo Go’doon geliyay Deegaano kuyaala Gobolada BBG
Posted by Webmaster on October 23, 2011 Comments
Maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan gobolada Baay, Bakool iyo Gedo ka da’ayay Roobab mahiigaan ah kuwaasi oo gebi ahaanba xiray wadooyinka soogala kana baxa deegaano ka tirsan gobolasaasi kor ku xusan.
Roobabka Mahiigaanka ah ee ka da’ay goboladaas ayaa waxa ay ahaayen kuwo muso saacado ah da’ayay iyagoona biyo aad u farabadan dhigay, islamarkaana sababay in ay go’doon galaan qeybo ka mid ah deegaanada goboladaasi.
Dadka deegaanka ayaa arintani walaac ka muujiyay iyagoo sheegay in roobabkani ay go’doomiyeen deegaano waaweyn iyo yar yarba ah oo horayba aan u laheyn wadooyin dayac tiran, maadaama wadooyinkii loomarayay ay Roobabku jareen.
Durbadiiba waxaa soo baxaya Wararka sheegaya in uu sara u kac ku yimid qeybaha kala duwan ee raashinka quutul daruuriga ah, maadaama uu hakad galay dhaq dhaqaaqii ganacsi ee deegaanadaasi uga imanjiray magaalooyinka waaweyn ee gobolka.
Sidoo kale waxaa jira Fatahaado xoogleh oo ay sameeyeen dooqooyin deegaanadaasi ku yaala, waxaana fatahaadahaasi deegaanada laga soo sheegayo ka mid ah deegaanka Ceelwaaq ee gobolka Gedo kaas oo sababay in shacabweynihii halkaasi ku dhaqnaa ay bilaabaan barakac xoogleh iyana.
Sikastaba ah ahaatee Roobabkan Mahiigaanka ah ayaa waxaa ay ku soo aadayaan xili qeybo badan oo ka mid ah koonfurta dalka ay ka jireen abaaro saameyn weyn yeeshay islamarkaana ay dad iyo duunyaba ku baaba’een.